Apple inowana nyanzvi nyanzvi yekutevera maziso | IPhone nhau
Apple inowana kambani inoshanda mukutarisa kuona ... kweiko?
Nzira dzeApple maererano neyakavanzika maindasitiri mafambiro anowanzo kuve akaomarara kujekesa. Apa tinoreva kuti maererano nebudiriro Padanho re software, chimwe chinhu chakasiyana zvachose chinoitika muCupertino pane zvinoitika padanho rehardware, uye ndeyekuti chinhu chinowanzoitika ndechekuti isu tinoziva iyo chaiyo dhizaini yeiyo iPhone mavhiki uye kunyangwe mwedzi isati yatanga, chimwe chinhu chisingawanzo kuitika mune dzimwe nyaya.
Pane ino chiitiko ticha taura nezve "ichangoburwa" kutora iyo Apple yaita mudunhu reGerman, uye ndizvo iyo kambani inotungamirwa naTim Cook yawana SensoMotric Instruments, kambani yakasimba mukutarisa kwekuona uye humwe hunyanzvi hwehukama.
Iyi yazvino hunyanzvi padanho rebhizinesi inogona kunge iine hukama neiyo Virtual Reality, Kuwedzera Kwechokwadi uye… nei zvisiri? neese matekinoroji panguva imwe chete. Maererano MacRumorsKubva muna Chivabvu 2 apfuura, nzira dzakakodzera dzemutemo dzakaitwa kusanganisa SensoMotric Instruments mubhizinesi rezvebhizimusi rekambani yeCupertino. Zvayo, Apple yaenda padambudziko rakakura, ichishandisa vamiririri vezvemitemo uye makuru maseru seVineyard Capital Corporation. Ehezve, iyo North America femu haifarire kupa zviyeuchidzo kune vayo vanokwikwidza nezvenzira yekudyara kwavo.
Shanduko dzekutanga dzave kutoitika pawebhusaiti yadzo, taigona kuona kuti yakavhura sei sarudzo kwemwedzi yakati wandei yapfuura iyo isingachawanikwe (pamwe mushure mekutorwa neApple), pamwe nechaiti chati yashandurwa zvachose. Zvirokwazvo, Iyi kambani yeGerman iyo yakavambwa mu1991 inoita kunge yakave chikamu cheApple, uye isu tinofungidzira kuti zvavakaita nezvekutevera kuona, Kuwedzera Kwechokwadi uye Virtual Reality, zvichakurumidza kusvika pane gare gare kusvika kumasisitimu anoshanda ekambani yeCupertino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple inowana kambani inoshanda mukutarisa kuona ... kweiko?